Uri Kusangana Nevatengi Vanotarisira Zvinotarisirwa Gore Iri? | Martech Zone
Mugovera, October 25, 2014 Douglas Karr
Unofanira kutanga rini kukwidziridzwa kwezororo? Uri kuronga kuita mishandirapamwe pamhepo? Uri kugadzirisa yako saiti saka vatengi vepamhepo vanogona kuwana nyore zvipo zvechipo? Uri kuitei kunyengedza vatengi vari showrooming kuti utenge ipapo ipapo ipapo? Une ruzivo rwakakwana rwechigadzirwa runowanikwa pane yako saiti? Ko yako online showroom inoenderana neyako chaiyo yekupa masheya? Ko yako yepamhepo nharembozha ruzivo rwunonakidza here?
SDL yakaongorora vatengi vanopfuura zviuru zvitatu muUnited States, France, Germany, The Netherlands, United Kingdom, uye Australia. Tsvagurudzo iyi inotarisisa chaizvo mwaka unouya wezororo uye mashandisiro anoita vatengi mazuva ano nemaki, kwavanonyanya kubatika uye kuti vatengesi vari kushandisa sei nyowani, nzira dzekushambadzira dzinovaita.
Iyi ndiyo mimwe mibvunzo yakakosha yaunofanirwa kutora matanho izvozvi apo isu tichienda kumhanya kuzere mumwaka wekutenga wezororo wa2014! Dzvanya kuburikidza neiyo infographic kurodha yakawedzera ruzivo pane iyo ongororo.
Tags: 2014 nguva yezororokuongorora kwevatengimazano ezvipokutenga zororowiriranasdlshowroomingpiritsi
Nhamba: Iyo Yakabatanidzwa Widget Dhibhodhi yeIOS